မြားမြားမပါဘဲမြှင့်တင် - သင် liabilities အပေါ်ကျောင်းမစတင်မှီသင့်ကလေးကိုရန်အသုံးပြုရ
ကျောင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ် - သငျလုံလောကျကြွင်းသောအရာသည်
သူငယ်တန်းကနေကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ - ဒါကြောင့်တစ်ဦးချောမွေ့အကူးအပြောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲ
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမကြာခဏပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးယနေ့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားဆရာ, ဆရာမကိုကွောကျရှံ့လျှော့ချရွေးချယ်သင်ကြားရေးနှင့်အများအပြားပျြော element တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကျောင်းတွင်စတင်အမြိုးသားအလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ကြိုးစားပါ။ သူငယ်တန်းနှင့်မူလတန်းကျောင်းအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအများအပြားသောနေရာများအတွက်တိုးတက်ခဲ့သည်။
သူတို့တစ်တွေ schoolchild အဖြစ်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍသစ်၏စဉ်းစားသောအခါမည်သို့ပင်ဆိုစေ, များစွာသောမူကြိုကျောင်းသားများ, မသာဝမျးမွောကျခွငျးခံစားရသည်။ အသက်တာ၏ယခုအသစ်အဆင့်နောက်ဆုံးမှာအများအပြားအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုဆောင်တတ်၏အပေါင်းတို့နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအထက်။
အဆိုပါသူငယ်တန်းအတွက်မြှင့်တင်ရေးနှင့်ကျောင်းသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုကျောင်းကလေးတစ်ဦးရုတ်တရက်အများကြီးပိုပြီးတာဝန်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်နိုင်, တနေ့လုံးဆော့ကစားရယ်မောနှင့်တဝိုက်ကို run ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်ကအိမ်စာမသန့်ရှင်းတဲ့စာလုံးကိုရေးသားဖို့အမြဲအဆင်သင့်ကသူ့စာအုပ်တွေမစောင့်, တပ်လှန့်ဖြစ်မယ့်အချိန်ကမိနစ် 45 ရမယ်နိုင်ဘူး။
ကျောင်းက စတင်. အများအပြားသားသမီးတို့အဘို့ဤထိတ်လန့်သည်။ ဒါကြောင့် liabilities အတွက်ကျောင်းအပ်မတိုင်မီကလေးများကိုအသုံးပြုရသဘာဝကျပါတယ်။ ဒါကကလေးတွေကိုနေ့တိုင်းစာရိုက်သို့မဟုတ်တွက်ချက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ကျောင်းကအသက်ရှင်ခြင်းသို့တစ်ဦးက start အဖြစ်ကျောင်းကစတင်ခြင်း
သင့်ကလေးကိုကျွမ်းဘားကလပ်သို့မဟုတ်ဂီတကျောင်းတက်လိုပါကဥပမာ, ကပထမဦးဆုံး non-စည်းနှောင်ရုံးတင်စစ်ဆေးသင်ခန်းစာအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသင့်ပါတယ်။ ထိုအခါကတစ်ဦးထပ်မံပါဝင်မှုအရည်အချင်းပြည့်မီသို့မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ သို့သော်: - နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်လျှင်သင့်ကလေးကိုတခါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆက်နေသင့်ပါတယ်လမ်းကိုအုပ်ချုပ်နေခဲ့ဖူး။
တစ်မူကြိုအချို့သောတာဝန်များကိုကျော်ကြာနိုင်ပါတယ်ရှိရာတိုင်းမိသားစုအခြေအနေများတွင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပေါ်ထွက်လာသော။ ဥပမာအားဖြင့်အမှိုက်ချ၏ task ကကိတ်မုန့်ကိုသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်စားပွဲတင်ထားရန်, သင်၏သမီးသို့မဟုတ်သင်၏သားကိုလွှဲပြောင်းပါ။ ဒါဟာသင့်ကလေးကိုတာဝန်တစ်ခုအသိမသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, တဦးတည်းသောကျောက်များနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လည်းအလေးအနက်ထားခံစားရ၏။ ထို့အပြင်, သူ့ယုံကြည်မှုခိုင်ခံ့စေ၏ဖြစ်ပါတယ်။
စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းကိုမိမိတို့အဘို့စဉ်းစားရန်အပြင်အမြဲသင့်ကလေးကိုအားပေးပါ။ ဆရာပြန်ခရီးစဉ်အဆုံးကဘာလဲပြောပြသလဲ? အဘယ်အရာကိုဝတ်စုံနွေရာသီပွဲတော်မှာစွမ်းဆောင်ရည်အဘို့အလိုကြသနည်း အဘယ်အရာကိုဖြစ်နိုင်ခြေသူမ၏ကလေးသည်နှစ်ခုအကောင်းဆုံးအစားအစာအကြားအငြင်းပွားမှုများအခြေချရန်သနည်း
ဤနည်းအားဖြင့်, သင်သည်လမ်းဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်-oriented ထင်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ ကြောင်းသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များအများကြီးပိုလွယ်ကြောင့်နှစ်ပါးကျွမ်းကျင်မှု, အရေးတကြီးကျောင်းသားများကိုလိုအပ်သည်။
ဒါ့အပြင်အရေးကြီးသော: သင်၏ကလေးသည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းနှင့်၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးမြှင့်တင်ရန်တတ်နိုင်သမျှကြပါစို့။ ဒါကြောင့်ကျောင်းကမှကြွလာသည့်အခါကဖြစ်သင့်သည်, ဥပမာ, စုစည်းနှင့်သူ၏ကိုယျပိုငျပစ်စညျးဂရုစိုက်ရန်, တစ်ဦးတည်းဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်မည်။
အထူးသဖြင့်တစ်ဦး schoolchild အဖြစ်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကလေးမြားအတှကျအထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုများဖြစ်ကြသည်။ သင်သာသင်ယူမှုဖို့အသုံးပြုပေမယ့်အမည်မသိအဆောက်အဦမာစတာအတွက်ကျောင်းလမ်းကိုသူတို့လမ်းကိုရှာတွေ့ခြင်းနှင့်အတန်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၎င်းတို့၏ရာအရပ်ကိုယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ရကြပါဘူး။ နေ့လည်ခင်းအိမ်စာအပေါ်ရပ်တယ်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်သည်သင်၏ကလေးသည်အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရရှိသွားတဲ့နှင့်ပင်တစ်နေ့တာအတွင်းပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အချိန်ရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်မိခင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဘကဲ့သို့ဖြစ်သင့်သည်။ V ကို
ဒါကြောင့်ကျောင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လုပ်ဖို့ကနဦးခက်ခဲအခါသင့်ကလေးအပေါ်ဖိအားပေးမထားပါနဲ့။ အတော်များများကပထမဦးဆုံးတန်းကျောင်းသူလေးဆရာအားဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုများအတွက်အချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာထားပြီးသူ့ကိုယ်သူထားတော်မူ၏။ မိမိအအိမ်စာအတူကကူညီပံ့ပိုးရန်သင့်ကလေးကိုဝေငှပေမယ့်သင့်ရဲ့အကူအညီကိုငြင်းဆန်လျှင်ပင်လက်ခံပါ။
ဒါ့အပြင်အရေးကြီးသော: သင်၏ကလေးသည်တစ်ဦးအမှားစေသည်ဆိုပါကသူတို့ကိုပြင်ပေးဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဆရာတစ်ဦးမှားယွင်းသောနှင့်မျှမတို့နောက်မှစိတ်ပျက်စရာရလဒ်များကိုမှကြွလာကိုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုထက်သင့်ကလေးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
သင်သည်သင်၏ကလေးသည်လွှမ်းမိုးကြောင်းသတိထားမိလျှင်, သင်အတန်းဆရာနှင့်အတူစကားပြောကြိုးစားပါ။ first-တနျးသူတို့ရဲ့ကျောင်းစာအပေါ်မိနစ်တက်ထိုင်တော့ဘူး 30 40 ထက်ဖြစ်သင့်ပါဘူး။
သူငယ်တန်းနှင့်ကျောင်းများအတွက်ကျန်းမာနံနက်စာ | အစာ
အရောင် Nessie မှ Loch Ness
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် cookies တွေကိုအစားအသောက်ထဲကနေရေငတ်ရပါသလဲ? ကလေးတွေဆိုတဲ့မေးခွန်းကို
အဘယ်ကြောင့်တစ်နေ့စောင့်ရှောက်မှုစင်တာ? | သူငယ်တန်းနှင့်ပညာရေး
Godparents ဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့ရှိပါတယ် | ပညာရေးကလေးများ